Google waxa ay xaqiijisaa in ay xalinayso arinta tusmaynta faallooyinka Disqus | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Google waxa ay xaqiijisaa in ay ku xalliso arinta tusmaynta faallooyinka Disqus
Google waxa ay xaqiijisaa in ay ku xalliso arinta tusmaynta faallooyinka Disqus
Martin Splitt oo ah maamulaha Google-ka ayaa xaqiijiyay horaantii todobaadkan in Google ay xalisay arin ku saabsan tusmaynta iyo qiimaynta qaar ka mid ah waxyaabaha laga helay madal ka faallooda Disqus. Ma cadda inta goobood ee ay arrintan saamaysay, balse Google ayaa sheegtay in hadda la xaliyay.
Waa maxay Disqus? Disqus waa goob ka faalloota oo u oggolaanaysa baloogyada iyo daabacayaasha inay faallooyinka ku daraan shabakadooda. In kasta oo goobo badan oo ka mid ah aysan u oggolaan faallooyinka isticmaaluhu soo saaray goobahooda, Disqus waa goob weli caan ah oo loo isticmaalo in lagu maareeyo, lagu ilaaliyo oo lagu dhexdhexaadiyo faallooyinka.
Glenn Gabe waxa uu qoray qoraal tifaftiran oo boloog ah bishii Diseembar ee la soo dhaafay isaga oo diiwaangelinaya arrimaha Google-ku leeyahay ee tilmaamaya qaar ka mid ah faallooyinka ay ku shaqeeyaan Disqus.
Google ayaa xalliyey arrinta. Toddobaadkii hore, Gary Illyes oo ka socda Google ayaa arrinta ku ogaaday qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuuna u gudbiyay saaxiibkiis Martin Splitt. Splitt wuu arkay arinta wuxuuna ku sii kordhiyey gudaha Google. Splitt ayaa ku yiri Twitter-ka Juun 18-keedii, “Tani waxay u egtahay cilad dhamaadkayada ah. Isha ku hay arrintan labada maalmood ee soo socda, waa inay ugu dambeyntii, suurtogal tahay, inay shaqeyso. "
Dhowr maalmood ka dib, Juun 20-keedii, Splitt waxay sheegtay inay hadda shaqaynayso oo, "Qof walba waa loo xalliyay."
Cusbooneysii: Waxaan awoodnaa inaan faallooyinka boggaas ku aragno raadinta Google hadda. Mahadsanid.
Laakin, waxa aanu isla arrintan ku haynaa domain & domain-hoosaad dhamaystiran. Iyo faallooyinka boggagan kale r uma muuqdaan raadinta.
Smthing wuxuu u baahan yahay in lagu hagaajiyo kuwan sidoo kale dhamaadka Google?
- Praveen Sharma (@i_praveensharma) Juun 20, 2020
Akhbaar weyn oo ku saabsan Disqus ka faallooda cilad uu @rustybrick daboolay shalay. Gelinka dambe ee maanta, waxaan arkayaa faallooyinka Disqus oo la tilmaamayo kuwaas oo aan hore loo tilmaamin. Waxay u egtahay in ciladu la hagaajiyay iyadoo lagu salaynayo baaritaankayga. Macluumaad dheeri ah halkan: https://t.co/fdke7JPFxo pic.twitter.com/w9p2rnOajQ
- Glenn Gabe (@glenngabe) Juun 23, 2020
Sababta aan u danayno. Haddii adiga ama macaamiishaadu isticmaasho Disqus, waa inaad isha ku haysaa darajooyinkaaga iyo qaababka tusmaynta. Haddi waxa ku jira faallooyinka Disqus aan hore loo tilmaamin, waxa laga yaabaa inaad aragto isbeddello darajo ah ka dib marka Google bilaabo tusmaynta iyaga - si togan ama taban. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad hagaajiso sida faallooyinkaas loogu muujiyo Google, iyadoo ku xidhan waxa aad aragto.
Microsoft waxay bilawday goob raadinta iyo maaraynta ololaha bulshada ee bilaashka ah ee SMBs
Sida loo habeeyo widgets-ka shaashadda guriga ee iOS 14